शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ०.३१ प्रतिशत बढ्यो, एक घण्टामै ४० करोडको कारोबार - Everest Dainik - News from Nepal
शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ०.३१ प्रतिशत बढ्यो, एक घण्टामै ४० करोडको कारोबार
काठमाडौं, वैशाख १६ । सोमबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले बढेको छ । यसदिन १ घण्टाको कारोबारमा परिसूचक ४ दशमलव शून्य ४ अंकले बढेर १ हजार ३ सय १८ दशमलव ५६ विन्दुमा पुगेको हो ।
यस अवधिको कारोबारमा १२ मिनेटमै १ हजार ३ सय २२ विन्दुमा पुगेको परिसूचक घटेर १ हजार २ सय ९९ विन्दुमा झरेको थियो। सो अवधिमा १ सय ३७ कम्पनीको ३ हजार ६ सय ४४ पटकको व्यापारमा रू। ४० करोड ७७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस छ अंकले झरेको नेप्सेमा ४६ करोडको कारोबार
निर्जीवन बीमा, ‘अन्य’, लघुवित्त र जीवन बीमा समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र बजार बढेको हो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढि कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको प्रति कित्ता रू। १ हजार ३ सय २८ मा रू. ७ करोड १० लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेप्से हरियो अंकमा पुग्दा किन खुशी देखिएनन् त शेयरबजारका लगानीकर्ता ?
ट्याग्स: share market